Nhau - Chii chinonzi USB Power Dhirivhari?
Nekudaro, iyi nyaya yekuenderana yave kuda kuve chinhu chekare nekuunzwa kweiyo USB Power Dhirivhi Tsanangudzo. USB Power Dhirivhari (kana PD, kwenguva pfupi) ndiyo imwechete yekuchaja standard iyo inogona kushandiswa kwese kwese USB zvishandiso. Kazhinji, chishandiso chimwe nechimwe chinobhadhariswa neUSB chichava neadapter yavo, asi kwete zvekare. Imwe yepasirose USB PD inozokwanisa kusimbisa akasiyana siyana akasiyana madivayiri.
Matatu Makuru Makuru e USB Simba Kuendesa?
Saka ikozvino zvaunoziva zvishoma nezve izvo iyo USB Power Dhirivhari standard iri, ndeapi mamwe makuru maficha anoita kuti ive yakakodzera? Dhirowa hombe nderekuti USB Simba Dhirivhari yakawedzera mwero emagetsi ematanho kusvika ku100W. Izvi zvinoreva kuti mudziyo wako unozokwanisa kubhadharisa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura nakare. Zvakare, izvi zvinoshandira akawanda madivayiri uye zvichave zvakanaka kune vashandisi veNintendo Shandura, sezvo pave paine kunyunyuta kwakawanda pamusoro pazvo kuchaja zvishoma.
Chimwe chinhu chikuru cheUSB PD inyaya yekuti gwara remagetsi harichagadzike. Munguva yakapfuura, kana iwe ukavhara foni yako mukombuta, yaigona kubhadharisa foni yako. Asi Nesimba Dhirivhari, iyo nhare yaunovhara mukati inogona kuve nebasa rekumisikidza hard drive yako.
Kuendesa Simba kuchaona zvakare kuti zvishandiso hazvibhadhariswe uye zvinongopa huwandu hunodiwa hwemuto unodiwa. Nepo mafoni mazhinji akangwara asingazokwanisa kutora mukana wesimba rakawedzerwa, zvimwe zvishandiso uye makomputa anokwanisa.
Kuendesa Simba - Kununura Iyo Ramangwana
Mukupedzisa, iyi nhanho nyowani yekuchaja USB inogona kuchinja nyika yetekinoroji sekuiziva kwedu. Nesimba Dhirivhari, huwandu hwezvigadzirwa hunogona kugovana zvavanobhadharana uye simba kune mumwe nemumwe zvisina kunetsa. Kuendesa Simba ingori nyore nyore uye nzira yakatsiga yekuenda kuchaja zvese zvishandiso zvako.
Sezvo mafoni edu nemidziyo zvinoramba zvichishandisa simba rakawanda uye rakawanda, USB Power Dhirivhari ingangove ichiwedzera kuwanda. Kunyangwe emagetsi emabhangi ave ne USB PD yekuchaja kana kushandisa zvishandiso zvinoda simba rakawanda (funga MacBooks, Swichi, GoPros, drones nezvimwe). Isu tiri zvechokwadi kutarisira ramangwana apo simba rinogona kugoverwa.